Solar DAO စျေး - အွန်လိုင်း SDAO ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Solar DAO (SDAO)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Solar DAO (SDAO) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Solar DAO ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Solar DAO တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Solar DAO များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Solar DAOSDAO သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.17Solar DAOSDAO သို့ ယူရိုEUR€0.992Solar DAOSDAO သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.895Solar DAOSDAO သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.07Solar DAOSDAO သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr10.59Solar DAOSDAO သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.7.39Solar DAOSDAO သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč26.1Solar DAOSDAO သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł4.38Solar DAOSDAO သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.56Solar DAOSDAO သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.63Solar DAOSDAO သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$26.17Solar DAOSDAO သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$9.05Solar DAOSDAO သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$6.35Solar DAOSDAO သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹87.6Solar DAOSDAO သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.197.02Solar DAOSDAO သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.6Solar DAOSDAO သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.77Solar DAOSDAO သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿36.46Solar DAOSDAO သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥8.14Solar DAOSDAO သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥123.7Solar DAOSDAO သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1388.9Solar DAOSDAO သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦448.58Solar DAOSDAO သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽86.1Solar DAOSDAO သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴32.38
Solar DAOSDAO သို့ BitcoinBTC0.0001 Solar DAOSDAO သို့ EthereumETH0.003 Solar DAOSDAO သို့ LitecoinLTC0.0205 Solar DAOSDAO သို့ DigitalCashDASH0.0119 Solar DAOSDAO သို့ MoneroXMR0.0125 Solar DAOSDAO သို့ NxtNXT86.1 Solar DAOSDAO သို့ Ethereum ClassicETC0.169 Solar DAOSDAO သို့ DogecoinDOGE344.42 Solar DAOSDAO သို့ ZCashZEC0.0127 Solar DAOSDAO သို့ BitsharesBTS44.79 Solar DAOSDAO သို့ DigiByteDGB39.96 Solar DAOSDAO သို့ RippleXRP4.05 Solar DAOSDAO သို့ BitcoinDarkBTCD0.0398 Solar DAOSDAO သို့ PeerCoinPPC3.9 Solar DAOSDAO သို့ CraigsCoinCRAIG525.71 Solar DAOSDAO သို့ BitstakeXBS49.21 Solar DAOSDAO သို့ PayCoinXPY20.14 Solar DAOSDAO သို့ ProsperCoinPRC144.76 Solar DAOSDAO သို့ YbCoinYBC0.00062 Solar DAOSDAO သို့ DarkKushDANK369.94 Solar DAOSDAO သို့ GiveCoinGIVE2497.52 Solar DAOSDAO သို့ KoboCoinKOBO262.06 Solar DAOSDAO သို့ DarkTokenDT1.08 Solar DAOSDAO သို့ CETUS CoinCETI3329.54
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 23:15:03 +0000.